INDLU ENDALA- iNdawo yoKhenketho lwasemaPhandleni
Ngaphezulu kwendawo yokhenketho yasemaphandleni, i-OLD HOUSE ngamava! Kwabo bandwendwelayo, abo bahlala kunye nabahlala apha. Sijonge ukwabelana neendwendwe zethu indlela yokuphila yasemaphandleni kunye neyendalo kodwa kwangaxeshanye, ikhululekile, iyasebenza, kwaye, ngaphezu kwayo yonke, isiPhuthukezi sokwenene!
INDLU ENDALA sisakhiwo sokuqala esakhiwa kwindawo yezolimo enenkulungwane yakudala. Obehamba indlela ejijekileyo, etyebile ngamabali othando kunye nentliziyo ebuhlungu, ubomi obumanziswe kukubila okukrakra kokusebenza emasimini kunye nezandi zovuyo zokukhulisa abantwana. Ziindonga zelitye eziqhelekileyo ze-shale zisixelela amabali amangalisayo abanini abalandelelanayo, kwaye apha sifuna ukuba wenze eyakho nawe!
Emva kweendonga zamatye kukho indlu yokuqala, eye yahlaziywa yaza yaxhotyiselwa ukunika intuthuzelo enkulu ekuhlaleni kwakho. Iqukethe amagumbi okulala ama-3 (ama-2 aphindwe kabini kunye ne-1 iwele), amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi, elidlulela kwindawo yebarbecue yangaphandle, apho ngokungathandabuzekiyo uya kudala iinkumbulo ezimnandi ukubalisa kamva. Kukwakho nendawo yokupaka yabucala.